समीक्षा ऊर्जा Sistem स्मार्ट वक्ता5| ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | स्पिकरहरू, ग्याजेटहरू, समीक्षा
आज हामी तपाईलाई धेरै रोचक समीक्षा दिन्छौं। हामी केहि दिनको लागि परीक्षण गर्दैछौं सबैभन्दा धेरै माग गरिएको घर सामानहरू मध्ये एक। संयुक्त राष्ट्र अलेक्सासँग मिल्दो स्मार्ट वक्ता, विशेष गरी ऊर्जा सिस्टेम स्मार्ट वक्ता 5। र अनुभव धेरै सन्तोषजनक भएको छ।
हामी कसरी हेरिरहेका छौं हाम्रो घर, हाम्रो उपकरणहरू मार्फत, बढ्दो आधुनिकीकरण गर्दैछन्। हामीसँग सफाईको लागि पहिले नै सामानहरू छन् जुन हामी स्मार्टफोनसँग नियन्त्रण गर्न सक्दछौं, जस्तै स्मार्ट भ्याकुम क्लीनरहरू। हाम्रो टिभीमा मोबाइल फोनको साथ वा बिना पनि हामीले प्रयोग गर्ने स्ट्रिमि plat प्लेटफर्महरूको उल्लेख नगर्न।
1 स्मार्ट स्पिकर with को साथ हाम्रो सेवामा अलेक्सा
2 सरल र आधुनिक डिजाइन
3 भागहरूमा स्मार्ट स्पिकर
4 उर्जा सिस्टेम स्मार्ट स्पिकर Technical का प्राविधिक विशेषताहरू
5 स्मार्ट स्पिकर technical टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टेबल
स्मार्ट स्पिकर with को साथ हाम्रो सेवामा अलेक्सा
उर्जा Sistem स्मार्ट वक्ता को रूप मा उपकरणहरु लाई धन्यवाद, हामी हाम्रो सेवामा सबैभन्दा प्रसिद्ध आवाज सहायकहरू मध्ये एक हुन सक्दछौं. alexa, सर्वशक्तिमान अमेजन द्वारा बनाईएको आवाज सहायकले हाम्रो दैनिक कार्यहरूमा मद्दत गर्दछ।
हाम्रो सेवामा सबै जानकारीहरू तपाईंको नाम उल्लेख गरेर। एक बुद्धिमान सहायक जसले हामीलाई पाउन मद्दत गर्दछ तपाईको तत्काल जानकारी चाहिन्छ मात्र सोधेर। एक नुस्खा, सन्देश पढ्ने, मौसम पूर्वानुमान, सबै कुरा हामी सोच्न सक्छौं, सोध्नुहोस् र उनी उत्तरहरू। तपाईले सोचे भन्दा बढी, र यहाँ तपाईं यसलाई अमेजनमा तान्न सक्नुहुन्छ नि: शुल्क शिपिंगको साथ।
स्मार्ट स्पिकर smart स्मार्ट स्पिकर आवरण गर्न आउँदछ बजारमा एक अन्तर जुन अझै थोरै निर्माताहरूले हिम्मत गरेका छन्। अमेजनको आफ्नै स्पिकरहरू बाहेक, हामीले विचार गर्न धेरै विकल्पहरू फेला पारेनौं। र Energy Sistem स्मार्ट स्पिकर प्रस्ताव गर्दछ ध्वनि गुणस्तर, उत्कृष्ट जडान र एक डिजाइन र मेल गर्न समाप्त घरको कुनै पनि कुनामा।
अधिक "जोडिएको" उपकरणहरू तपाईंसँग छन् घरमा अधिक उपयोगिता तपाईंसँग यो स्मार्ट स्पिकर हुनेछ। परम्परागत घरहरुमा, घर स्वचालनको आगमन एकदम ढिलो छ। यद्यपि स्मार्ट लैम्प, स्मार्ट टिभी र निश्चित रूपले हाम्रा स्मार्टफोनहरूलाई धन्यवाद छ, तर हाम्रा घरहरू अलि अलि चतुर छन्। स्मार्ट वक्ता5लाई धन्यवाद, समाचार सुन्न वा मौसम पूर्वानुमान थाहा पाउनको लागि हामी एलेक्सालाई सीधा आदेश दिन सक्छौं। Bप्रकाशको चमक तल, टिभी खोल्नुहोस् वा बन्द गर्नुहोस्, वा राख्नुहोस् कोठाको तापक्रम २ºº मा।
हामी भन्छौ, हामीसँग छ कि एक इन्टरनेट जडान संग उपकरणहरूमा निर्भर गर्दछ, अधिक उपयोगी हाम्रो स्मार्ट स्पिकर हुनेछ। त्यसो भए प्रयोग को अनुभव प्रत्येक विशिष्ट केस मा एक धेरै निर्भर गर्दछ। यद्यपि हामी भन्न सक्दछौं कि हाम्रो संगीत बजाउनको लागि स्पिकरमा मात्र गणना, र कुनै पनि प्रश्नहरूको लागि एलेक्सा उपलब्ध हुनु पहिले नै उत्तम छ।
सरल र आधुनिक डिजाइन
मुख्य मध्ये एक तपाईं हिट त्यो सुरुमा थियो अमेजनको आफ्नै स्पिकरहरूमा यो ठीक थियो डिजाईन। एक लापरवाह डिजाइन सोबर लाइनहरू र रंगहरू र केही सम्भावनाहरूको साथ। नयाँ मोडेलहरूले पनि कालो र color र धेरै आधारभूत लाइनहरूको साथ बेलनाकार आकार कायम राख्न जारी राख्छ।
ऊर्जा सिस्टेम पूर्ण रूपमा यो अवधारणा परिवर्तन गर्दछ स्मार्ट वक्ताको साथ सोबर वक्ता को साथ 5. एक संग वर्ग आकार र लाइटर शेडहरू एलेक्सा कुनै पनि घर शैलीमा एक राम्रो फिट बनाउँछ। भित्र एक निर्माण संग गुणस्तरको सामग्री, र हल्का निलो रंगहरूमा समाप्त स्पिकरमा र सेतो प्लास्टिक, यो दृष्टि द्वारा धेरै राम्रो जान्छ।
यस प्रकारको स्पिकरको शारीरिक विशेषताहरू मध्ये एक, यदि हामीले तिनीहरूलाई संगीत बजाउन मात्र प्रयोग गर्नेहरूसँग तुलना गर्यौं भने, तिनीहरूको स्थान हो। हामी भेट्छौं शीर्षमा नियन्त्रणहरू र यो ठाडो खडा टेबल वा शेल्फमा एक बेलनाकार आवाज प्रदान गर्दै त्यो राम्रो कोठा को कुनै पनि ठाउँमा पुग्छ जहाँ यो अवस्थित छ। यदि यो तपाईले खोजिरहनु भएको हो भने अब यो अमेजनमा किन्नुहोस् शिपिंग शुल्क बिना।
भागहरूमा स्मार्ट स्पिकर
त्यसोभए हामी देख्छौं शीर्षमा प्लेब्याक नियन्त्रण बटन र केही अधिक। तल हामी फेला पार्दछौं अलेक्सालाई "आह्वान" गर्न बटन थिच्नुहोस्। एउटा बटन जुन हामीले केवल प्रेस गर्नु पर्छ यदि हामीसँग माइक्रोफोन म्यूट गरिएको छ। केन्द्रमा हामीसँग अन / अफ बटन छ जुन प्ले / पजको रूपमा पनि कार्य गर्दछ।
उही बक्समा हामीसँग पनि छ भोल्युम माथि र तल बटनहरू। यी पनि पारित गर्न सेवा गर्दछ अगाडी वा पछाडि गीतहरू। पहुँच गर्न एक बटन menu कन्फिगरेसनको। र अन्तमा एक रोचक उपयोगिताको साथ बटन माइक्रोफोन म्यूट गर्नुहोस्। यो बटन सक्रिय भएपछि, स्पिकरमा रातो एलईडी बत्ती प्रज्ज्वलित हुनेछ। र स्पिकरले हाम्रो सुन्न सक्दैन यदि हामी एलेक्सालाई कल गर्छौं।
बटनहरू माथि छन् दुई ओम्नी दिशात्मक माइक्रोफोनहरू। हामीले भन्नु पर्छ कि हामी तपाईंको बाट धेरै आश्चर्यचकित थियौं उत्कृष्ट संवेदनशीलता। ऊ हाम्रो कुरा सुन्छ र कोठामा व्यावहारिक रूपमा कहिँ पनि एलेक्सा भन्छौं भने हामी त्यहाँ उपस्थित हुन्छौं। अपेक्षित भन्दा बढि दूरीमा पनि।
तपाईको बाँकी शरीर एकसमान छ। यो संग गोलाकार कुना समाप्त हुन्छ जसमा स्पिकर नेट निर्बाध रुपमा यसको कालो प्लास्टिक फ्रेममा फिट हुन्छ। यसको पछाडि हामी मिनी ज्याक कनेक्टरको लागि पावर इनपुट र सहायक जडान पोर्ट फेला पार्दछौं। स्मार्ट स्पिकर ले तपाईंलाई धेरै प्रस्ताव गर्दछ, अब यो अमेजनमा पाउनुहोस्.
उर्जा सिस्टेम स्मार्ट स्पिकर Technical का प्राविधिक विशेषताहरू
यदि हामी यस स्पिकरले प्रदान गर्ने प्राविधिक सुविधाहरूमा ध्यान दियौं भने, हामी फेला पार्दछौं चाखलाग्दो तथ्य र संख्याहरू। स्मार्ट वक्ता5छ २.० स्टेरियो ध्वनि र एक संग शक्ति सभ्य भन्दा बढी 16W बाट। एक शक्तिशाली वक्ता खुल्ला स्थानमा चर्को संगीत सुन्न अपेक्षा नगर्नुहोस्। तर शयनकक्षहरूमा वा बैठक कोठामा यसले एक प्रस्ताव गर्दछ कुरकुरा, पर्याप्त आवाज स्तरको साथ स्पष्ट ध्वनि.
La ब्लुटुथ जडान कुन खाता संग छ कक्षा १०, जोसँग काम गर्दछ २.2.4 घगाह फ्रिक्वेन्सी र साथ २० मिटरको दायरा सम्म। ताररहित कनेक्टिभिटी वाईफाई वा ब्लुटुथका साथै हामी यसको मार्फत उपकरण जडान गर्न सक्छौं Mm.mm मिमी मिनी ज्याक इनपुट। पनि हाइलाइट गर्दै कनेक्टिविटी त्यो प्रस्ताव गर्दछ ऊर्जा सिस्टेम परिवारको स्पिकरहरूको धेरै संग जुनबाट हामी पनि एलेक्साको आनन्द लिन सक्दछौं।
अमेजनमा निःशुल्क शिपिंगको साथ यहाँ ऊर्जा सिस्टेम स्मार्ट स्पीकर Buy खरीद गर्नुहोस्
हाइलाइटहरू ए ध्वनी बक्स लकड़ी मा निर्मित जसले स्मार्ट स्पीकर has मा भएको न्यानोपन र ध्वनि प्रदान गर्दछ। र एलईडी लाइटको एक चाप जसले सम्पूर्ण माथिल्लो भागलाई घेर्छ र जुन हामी दिन्छौं अर्डरको आधारमा र color परिवर्तन गर्दछ वा जुन राज्यमा यो हुन्छ। यसको स्थापना र प्रयोग को माध्यम बाट प्रभावी ढंगले सरलीकृत छ एक समर्पित र विशेष अनुप्रयोग धन्यबाद जुन धेरै नै छोटो समयमा तपाईं स्पिकर पूर्ण क्षमतामा प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
ऊर्जा मल्टरूम Wi-Fi
विकासकर्ता: ऊर्जा सिस्टेम
स्मार्ट स्पिकर technical टेक्निकल स्पेसिफिकेशन टेबल
मोडेल स्मार्ट वक्ता।
ध्वनी प्रणाली Estero २.०
पोटेरिया 16W- को 2W -8 स्पिकर
माइक्रोफोनहरू २ ओम्नी दिशात्मक
कनेक्टिविटी वाइफाइ - ब्लुटुथ - ऑक्स ज्याक mm. mm मिमी
कार्य आवृत्ति 2.4 गीगा
आयामहरू 112 एक्स 112 एक्स 211
वजन 1.260 किलो
मूल्य 99.88 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् ऊर्जा सिस्टेम स्मार्ट स्पीकर 5
चिकना र आधुनिक डिजाइन
मूल्य सस्तो छ
कुनै ब्याट्री छैन
आउटडोर संगीतको लागि कम शक्ति
ऊर्जा सिस्टेम स्मार्ट स्पीकर 5
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » ऊर्जा Sistem स्मार्ट स्पिकर5को समीक्षा गर्नुहोस्
Acer Predator X27, प्रत्येक गेमर [विश्लेषण] को सपना देख्छ कि मोनिटर